Ogaden News Agency (ONA) – Xaqiiqada jirta iyo cadawga siduu rabo
Xaqiiqada jirta iyo cadawga siduu rabo
Shacabka S.Ogadenya oy JWXO hogaaminayso iyo cadawga Itobiya waxaa ka dhexeeya halgan adag oo dhiig badan uu ku daadanayo. Arintaa caalamka ma mooga, hasa ahaatee Itobiya sidii dhaqanka u ahaa gumaysiga waxay aad isugu taxluujisaa inay abuurto jawi ah in looltanka siyaasadeed iyo dagaalka ka socda Ogadenya uu yahay mid u dhexeeya JWXO oy nabadiid ku tilmaanto iyo maamulka ay ka dhistay Jigjiga oy u sawirto inuu is-xukumo.
Xagga siyaasadda waxay u xilsaartay inay ku hadlaan afkeeda kooxihii is-dhiibay iyo inta la socota, xagga ciidamada iyo dagaalkana waxaa loo xilsaaray Cabdi iley iyo maamulkiisa.
Sidaa darteed markasta oo dagaal adag uu dhex maro labada ciidan oo jab balaadhan uu soo gaadho cadawga, waxay Itobiya kaga jawaabtaa marka la weydiiyo dagaalkaa siduu u dhacay inaysan ciidamadeeda ku shaqa lahayn oo dagaalku uu dhex maray koox ONLF ah iyo booliiska deegaanka oo waliba siday yidhaahdaan marwalba ay taageerayeen dadka deegaanka. Waxaa durbadiiba ku xigsada Cabdi iley iyo kooxdiisa oo soo wadha sawiro iyo dad shacab ah oo laga hadalsiinayo iyo kooxo durbaano iyo sacaba tumaya oo leh waxaan soo laynay nabadiidkii. Hadafka ugu dambeeya ee gumaysiga uu ka leeyahay qorshahana waa inay ONLF u jawaabto gumaysi ag-oolka oy la ficiltanto, halkaana ay ku lunto xaqiiqada dhabta ah ee dhulka taala iyo jabka soo gaadhay ciidamadeeda.
Cabdi iley iyo aaladiisa dacaayadeed muddo aan ka yareyn 3ex maalin ayay la jahawareer-sanaayeen dagaalkii kadis ahaa ee lagu qabsaday xerada Galaalshe, waxayna ka sugayeen fariin Addis-ababa oo ku mashquulsanayd dabaaldagga Meles. Dadbadan oon kala hadalnay Jigjiga waxay intaa lahaayeen Cabdi iley murugo badan ayaa ka muuqata wuxuuna diiday inuu cidna la hadlo.
Hadaan xoogaa warbixin yar oo hordhac ah ka bixino khasaaraha soo gaadhay cadawga dagaalkii lagu qabsaday xerada Galaalshe waa sidan;
1. Dhimashada la hubo ilaa hadda waa 273 ay 17 yihiin saraakiishii xerada.
2. 147 la soo qafaalay oo u xareysnaa tababar hawaarin ayaa laga sii daayay.
3. Waxaa xabsiga laga sii daayay oo kale dad badan oo u xidhnaa gumaysiga.
4. Gaadiidka lagu gubay xerada waa 4.
5. Hubka iyo agabka kale ee laga furtay waa xad dhaaf gadaal ayaanan ka soo faahfaahin doonaa.
Waxaa intaa dheer dagaal kale oo lagu naafeeyay ciidamadii gurmadka ahaa.
waan hubaa sidaad wax usooqoratay inay 95% ay tahay sax hadaysan
Tankale maydadka waxaa ubadan ciidanka ethopia waxaan qiyaasayaa
waxaa kujira wax aan kabad neeyn 8 mujaahid, waxaad ka fahmeeysaa
siday kaameerada oogu dhaweeynayaan mujaahidiinta
laakiin ku wa kale korka ayeey kaga qabanayaan
Laakiin ciidankoodii oo dharkii gumeeysiga wata weeye waxa ay inooga dhigeen jwxo.
Ethopia weey ucadahay inay jwxo kutaagan tahay jid aay ku guuleeysaneeyso
Ethopia aad ito aad beey ooga wal wal san tahay halganka shacabka ogadeenya
Walaalayaal waxaan idin leeyahay:-Wallee inaysan laakiin ahayn laydha socotaaye, libinbaa dhaw ruuxii jihaad laabta ku hayoowe. Waxaa kale oon walaal kuleeyahay, laaxin lagaa jari maayo way jabeen gaalo daqlay.
wadankii oon la haydlay waxa la ii sheegay in jabkii oogu waynaa uu ku dhacay ciidamada xabashida iyo hawaarinta lakiin waxaanu jwxo ka sugaynay in ay video maxaabiistii laga qbatay xaga cadawga ay soo galiyaan si inta yar een xaqiiqda ogayn oogu quusqaataan tabarta cadawga inta ay lla egtahay
Allaahu akbar, Allaahu akbar, Allaahu akbar. Walaal kamaalow waxba ugama baahnin tallaabooyinka ay qudhun wada qaado ookale, sababtoo ah iyaga ayaa intay bakhtigooda soo sawireen kutilmaamay wax aan kasoconaynin.markaawalaal xaqiiqaduna waa halgamaaga jwxo, labo sadle inuu yahay, huuro lay wayaanona gabalkeed inuu dhacay.
walahi tani waa wax lagu farxo cadawgii ilahay iyo cadawgeena oo saas ujabay waxaan leeyahay alhamdulilaah. ethiopia waysii dhacaysaa ninkii kufaraxsan iyo kii kaloow. maant maalin kafiican majiro maxaa yeelay Ogaden , amhaara, iyo oromo oo dhahaya war halmeel ah aan wax uwadno kahorna madhicin. meles zanawi na taas ayuu ka calool xun yahay. waana shabeel dhaawacsan oo wuxuu latagi dad badan taasna hala ogaado. takale waxaan kamaqlay meles zanawi oo uu baray siyaasada somali oo aan youtube kadaawaday iska oo dhahaya ogaaden oo dhan lama dagaalamayno oo waan laheshiinay ogaden dadka ugu badan. waxaan ladagaalamyno waa rer isaaq kaliya markaasaan ogaaday in ay tan tahay tii ugu dambeeysay oo uu kudayayo shacabka rer ogadenia waxaan idin leeyahay cadowgu dagaal waan kaga adkaanay bi idnillah, abdi iley (damiir laawe) ogaden sidaas kukala dilimaayee wakhtiga haa iska lumin. soona duceeya in uu ilaahay munaafaqiintaa inaga qabto amiin amiin amiin ya allah.